बन्द हुँदै राडीपाखी उद्योग
annapurnapost.com . ३ महीना अघि
भोजपुर : उत्पादित सामग्रीले उचित बजार र मूल्य नपाएपछि भोजपुुरका राडीपाखी तथा अल्लोका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन्। भेडाको ऊन झिकी बनाइने राडीपाखी तथा अल्लोबाट तयारी गरिएका सामग्रीको भाउ खस्केपछि ...
भैरहवा सेज औपचारिक रुपमा सञ्चालन, उद्योग दर्ताका लागि एकद्वार प्रणालीको शुरुआत
abhiyan.com.np . ३ महीना अघि
जेठ १, भैरहवा । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । सेज भित्र स्थापना भएको शक्ति मिनरल्स प्रालिले व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेसँगै सेज पनि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा...
शतप्रतिशत नाफा हुँदा पनि किन फस्टाएनन् चितवन-नवलपुरका पानी उद्योग ?
२८ वैशाख, चितवन । भनिन्छ पानीको बिजनेसमा मनग्गे फाइदा छ, तर आपसी खिचातानी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण चितवन र नवलपुरका पानी उद्योगहरु भने फस्टाउन सकेका छैनन् । पानीको बजार विगतको तुलनामा बढे पनि ...
शक्ति मिनरल्सको शुरुआतसँगै सेज औपचारिक सञ्चालनमा
भैरहवा । भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा सञ्चालित शक्ति मिनरल्स प्रालिले मंगलवारदेखि व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको छ । उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै सेज समेत औपचारिक सञ्चालनमा आएको हो । सेज तथा उद्यो...
नयाँ उद्योग दार्ताको लागि एकद्धार प्रणाली: मन्त्री यादव
बुटवल– संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका प्रसाद यादवले उद्योग दर्ताका लागि मन्त्रालयमा एकद्धार प्रणालीको सुरुवात गर्न लागेको बताएका छन् । उनले २०७३ सालदेखि भनिँदै आएपनि यह...
सञ्चालन भयो भैरहवा सेज
भैरहवा : निर्माण सकिएको लामो समयपछि भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा आएको छ। शक्ति मिनरल्स प्रालिले आफ्नो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएसँगै सेजभित्र उद्योग सञ्चालन सुरु भएको हो। उद्योगमन्त्र...
भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा, उद्योगमन्त्री भन्छन्– ढोका थुनेर विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्न
nepallive.com . ३ महीना अघि
अर्थ भैरहवा- लामो समयमो प्रतीक्षापछि भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा आएको छ। सेजमा शक्ति मिनरल्स प्रालिको उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै सेजको औपचारिक सुरुवात भएको हो। सेज तथा उद्योगको ...
सेजमा उद्योगले उत्पादन थाल्‍यो, असारअघि नै निर्यात गर्ने तयारी
बुटवल-देशको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा स्थापित उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको छ। गत वर्ष असार महिनामा भैरहवा सेजमा पहिलो उद्योगको रुपमा स्थापना भएको शक्ति मिनरल्स प्रालिले उत्पादन सुरु गरेको ...
भैरहवा सेजमा उद्योग संचालन
३१ वैशाख, बुटवल । स्थापना भएको वर्षौंसम्म उद्योग संचालन हुन नसकेको नेपालककै पहिलो भनिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा पहिलो उद्योगका रुपमा शक्ति मिनरल्स उद्योग संचालनमा आएको छ । ४० करोड ...